Libanona : Fantaro i Ziad Antar, Libaney mpamokatra lahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2011 19:50 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Español, Français
Fa iza moa ireo Libane mpanakanton'izao vanimpotoama izao? Manodidina ny fanadihadiana anaty aterineto iray eo ampanomanana ary mikasika ny tontolon'ny fisehoana an-tsehatra vao misondrotra ao Libanona, ny bilaogy mpiara-miasa amin'ilay fanadihadiana, Libalel, no manasongadina ireo mpanakanto toa an'ilay Libane mpamokatra lahatsary Ziad Antar.
Ziad Antar dia teraka tamin'ny 1978 tao Saïda any Libanona ary miasa eo anelanelan'i Saïda sy Parisy amin'izao fotoana. Manohana mpamokatra sy mpanatanteraka lahatsary maro aloha no ataony ao Libanona (Akram Zaatari, ankoatr'ireo maro hafa), miasa ho an'ny Fondation Arabe pour l’Image à Beyrouth (Ivontoerana Arabo ho an'ny Sary ao Beyrouth) ary nihaona tamin'ilay mpanakanto Jean-Luc Moulène. Tamin'ny 2003, norasina tao amin'ny Pavillon du Palais de Tokyo tao Parisy izy ary manaraka ny La Seine, le post diplôme de l'ENSBA (Beaux-Arts). Nanao fampirantiana tao amin'ny New Museum of Contemporary Art de New York ( Mozea Vaovaon'ny Zavakanton'ny Vaninandro Maoderina), tamin'ny Biennale de Sharjah tany amin'ny Emira Arabo mitambatra sy tao amin'ny Centre Pompidou ao Paris, ankoatr'ireo maro hafa.
Ny bilaogy Libalel dia liana tamin'ny làlana nizoran'i Ziad Antar :
Iray amin'ireo lahatsariny voalohany ny TOKYO TONIGHT, notontosaina tamin'ny 2003 no maneho tsara izay làlan-kizorany izay.
Fihaonana noraisim-peo niarahana tamin'ilay mpamokatra lahatsary nandritra ny fampirantiany tao amin'ny galerie “Où” tao Marseille
Resadresaka tao amin'ny Zenith Magazine, gazetiboky anaty aterineto miresaka zavakanto sy ny kolotsaina any amin'ny tontolo arabo